Tiketi OBB na-ere ọnụ ala na ọnụ ahịa njem | Chekwa ụgbọ oloko
Tiketi OBB na-ere ọnụ ala na ọnụ ahịa njem
Ụlọ > Tiketi OBB na-ere ọnụ ala na ọnụ ahịa njem
You nwere ike ịchọta ozi niile gbasara Tiketi ụgbọ oloko OBB dị ọnụ ala na Ọnụ ego njem njem OBB na uru.
isiokwu: 1. OBB site na Train Highlights
2. Banyere OBB 3. Top Insights iji nweta tiketi ụgbọ elu OBB dị ọnụ ala
4. Ego ole ka tiketi OBB na-eri 5. Rozọ Njem: Kedu ihe kpatara o jiri dị mma iji ụgbọ oloko OBB, gharakwa njem ụgbọelu
6. Kedu ihe dị iche na .kpụrụ ọkọlọtọ, Nkasi obi, na Sparschiene na OBB 7. Enwere ndenye aha OBB
8. Ogologo oge tupu ọpụpụ nke OBB ịbịarute 9. Kedu ihe usoro ụgbọ oloko OBB
10. Kedu ụlọ ọrụ ndị OBB na-eje 11. OBB FAQ
OBB site na Train Highlights
Na oke usoro akara aka nke 96%, OBB (mgbe ụfọdụ ana - akpọ OEBB) bụ otu n’ime ndị na-ahụ maka ndị na-anya ụgbọ okporo ígwè na Europe.
Kwa afọ, OBB na-ewe 447 nde mmadụ na 105 nde tọn ngwa ahịa gafere ebe ha na-aga n'ime Austria na gafee Europe.
OBB nwere mmebi gburugburu ebe obibi, na 100% A na - enweta ike eletrik ha niile na - enweta ike.
OBB bu onye na-ahu maka ngwangwa ndi Austria.
OBB, Razọ Federalgbọ njem ndị Austrian, bụ aha ọzọ maka Federallọ okporo Federal nke Ọstrịa. Ebe ọ bụ na e guzobere ya 1923, OBB enyerela ụmụ amaala Australia ọrụ ịgagharị agagharị kemgbe ọtụtụ afọ. Otu nnyocha emere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara nke ahụ na Europe, OBB kacha mma n’oge, pụrụ ịdabere, na ugboro ole.
OBB na-enye ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị n’Austria na gafere Europe. Na tiketi ziri ezi, ị nwere ike ịga niile kachasị mma ebe ezumike na Europe. Na tiketi dị iche iche na ntinye aha kaadị, OBB na-echebara mkpa onye ọ bụla echiche.
OBB ụgbọ oloko ugboro ugboro na Vienna – Ahịhịa, Salzburg – Vienna, Linz – St. Polten, Graz - Salzburg. Nwekwara ike iji ụgbọ oloko OBB banye mba ndị agbata obi gị n'ime Europe.
Gburugburu ụlọ ọrụ ahụ, 41,904 ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ okporo ígwè na netwọk ụgbọ ala (gbakwunyere 2,000 nkuzi) gbaa mbọ hụ na ụfọdụ 1.3 nde ndị njem na-erute ebe ha na-aga kwa ụbọchị n'enweghị nsogbu ọ bụla.
gaa Chekwaa Homepage Train ma ọ bụ jiri wijetị a chọọ na-azụ tiketi maka OBB
Top Insights iji nweta tiketi ụgbọ elu OBB dị ọnụ ala
Nọmba 1: Detuo tiketi OBB tupu ị nwee ike
Pricegwọ nke OBB ụgbọ oloko na-ebili ka ụbọchị njem na-abịarukwu nso. Inwere ike chekwaa ego site na iwere tiketi OBB tiketi di ala karie ka o kwere omume site n’ụbọchị ọpụpụ. OBB ụgbọ oloko dị ka n'oge 3 ka 6 ọnwa tupu njem ụgbọ oloko aga. Iwepu oge na-enyere gi aka inweta tiketi ụgbọ oloko OBB dị ọnụ ala. Onu ha na onu ogugu, yabụ na ị ga-eme akwụkwọ, dị ọnụ ala karịa maka gị. Ka ichekwaa ego na tiketi ugbo ala OBB, zụta tiketi gị n'isi.
Nọmba 2: Njem site na OBB n'oge oge kachasị-elu
OBB ụgbọ oloko na-bụ dị ọnụ ala karịa n'oge oge kachasị elu, na mmalite nke izu, ye ke uwemeyo. Can nwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè n'ime izu. Na tusde, Wenezde, na Tọzdee, OBB ụgbọ oloko na-enweta akụ na ụba. N'ihi olu nke ndị njem azụmaahịa na-aga ọrụ n'ụtụtụ na mgbede, Tiketi ụgbọ oloko na-efu ihe. Ọ dị ọnụ ala karịa ịga njem n'oge ọ bụla n'etiti ụtụtụ na anyasị. Oge ngwụsị izu bụ oge ọzọ kachasị elu maka ụgbọ oloko, tumadi na Fraịdee na Satọde. Ọnụ ego ụgbọ oloko OBB na-arịkwa elu ezumike ọha na eze na ezumike ụlọ akwụkwọ.
Nọmba 3: Denye tiketi maka OBB mgbe ijiri usoro nhazi njem gị
OBB ụgbọ oloko na-achọsi ike, ya na obere asọmpi, ha ka bụ ugbu a kachasị nhọrọ maka ụgbọ oloko na Austria. Ha ga - enwe ike ịbanye ihe mgbochi ụgbọ oloko dịka nke ha nwere nke machibidoro ịgbanweta ma ọ bụ nkwụghachi tiketi ọ gwụla ma ọ bụ ụdị tiketi ọ bụla.. Ọ bụ ezie na a ka nwere ebe nrụọrụ weebụ ị nwere ike ire ndị mmadụ aka gị tiketi, OBB anaghị anabata ịre ahịa tiketi nke abụọ. Kedu otu esi enyere gị aka ịchekwa ego? Nye iwu tiketi gị naanị mgbe ị ji n'aka na usoro oge ị ga --echebe gị ịmebe otu tiketi ugboro abụọ n'ihi na ihe bịara na ịnweghị ike iji tiketi mbụ..
Nọmba 4: Zụta tiketi gị nke OBB na Save A Train
Chekwaa Tragbọ oloko nwere nke kasịnụ, nke kacha mma, na nkwekọrịta dị ọnụ ala maka tiketi ụgbọ oloko na Europe. Njikọ anyị na ọtụtụ ndị na-anya ụgbọ okporo ígwè, isi mmalite ụgbọ oloko, na ihe omuma anyi banyere algorithms nke teknụzụ na-enye anyị ohere ịre azụ tiketi ụgbọ ala kachasị ọnụ. Ọ bụghị naanị na anyị na-enye akwụkwọ nkwado ụgbọ ala dị ọnụ ala maka OBB naanị; anyị na-enye otu maka ọzọ maka OBB.
Ego ole ka tiketi OBB na-eri?
OBB tiketi na-amalite site na € 1,5 ruo ihe dị ka € 51 maka njem ụgbọ oloko. Nke ọnụahịa nke ụgbọ oloko ụgbọ njem OBB dabere na ụdị tiketi ịzụrụ na mgbe ịchọrọ ịga njem:
Ọkọlọtọ € 1,50 – € 51 € 2,40 – € 100
Klaasị mbụ € 1,50 – € 51 € 2,40 – € 100
Rozọ Njem: Gini mere o ji ka nma ka icho ụgbọ oloko, gharakwa njem ụgbọelu
1) You rute na etiti obodo. Nke a bụ otu uru ụgbọ oloko OBB ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu. OBB ụgbọ oloko na ụgbọ oloko ndị ọzọ na - esite ebe ọ bụla n'obodo wee ruo n'etiti obodo na - esote. Ọ na-azọpụta gị oge na ọnụ ahịa nke cab si ọdụ ụgbọ elu na etiti obodo. Na ụgbọ oloko na-akwụsị, ọ dị mfe ịnweta ebe ọ bụla n'obodo ị na-aga. Ọ baghị uru ebe ị na-esi, Munich, Salzburg, Linz, ma ọ bụ Cologne, nkwụsị nke etiti obodo bụ nnukwu uru nke ụgbọ oloko OBB!
2) Iji ụgbọ elu na-eme njem chọrọ ka ị nọrọ ọdụ ụgbọ elu ọbụlagodi ọtụtụ elekere tupu oge ụgbọ elu gị. Dkwesiri ịga n'ihu na nyocha nche tupu ikwenye gị ịbanye ụgbọelu. Na ụgbọ oloko OBB, have ga-anọ n'ọdụ ụgbọ ala ihe na-erughị otu awa tupu oge eruo. Mgbe ị tụlere oge ọ ga-ewe gị iji si ọdụ ụgbọ elu gaa etiti obodo ahụ, ’ga-amata na ụgbọ oloko OBB dị mma n'ihe gbasara oge njem niile.
3) N'elu elu, ọnụahịa nke tiketi ụgbọ elu OBB yiri ka ọ na-efu ọnụ karịa tiketi ụgbọ elu mmefu ego. Otú ọ dị, mgbe ị tụlere ebubo niile metụtara ya, OBB ụgbọ oloko nwere ọnụ ahịa ahịa ka mma. Na ụgwọ ndị ọzọ dịka ụgwọ akpa ị na-agaghị akwụ ụgwọ n'ụgbọ oloko, OBB na-eme njem kacha mma.
4) Gbọ oloko bu Enyi gburugburu. Na ntụnyere n'etiti ụgbọ oloko na ụgbọ elu, insgbọ oloko na-apụta n’elu. Gbọ elu ikuku na-emebi ikuku dị elu site na carbon dị elu ha na-enye. Insgbọ oloko tụnyere mgbe ike gwụrụ Carbon 20X pere mpe karịa ụgbọ elu.
Kedu ihe dị iche na .kpụrụ ọkọlọtọ, Nkasi obi, na Sparschiene na OBB?
OBB nwere klaasị dị iche iche maka ego dị iche iche na ụdị ndị njem: ma ọ bụ azụmahịa ma ọ bụ oge ntụrụndụ. Nwere ike ijide n’aka na otu n’ime tiketi ndị a ga-abara gị uru.
Tiketi OBB Standard:
Tiketi ọkọlọtọ bụ tiketi na-agbanwe agbanwe nke OBB na-enye. Ọ bụrụ na ị ga-eme njem dị mkpirikpi, ị kwesịrị ị nweta tiketi a. Are gaghị amachaghị otu ụgbọ oloko, ị ga-ahapụ gị ịhọrọ njikọ gị. OBB akwụkwọ ọkọlọtọ dị mma maka 2 ụbọchị n'agbanyeghị na ụzọ na zụta ọwa. Enwere ike ịgbaghachi tiketi ọkọlọtọ n'efu na ụbọchị tupu ụbọchị izizi ya. Mgbe ịzụta tiketi a n'ịntanetị, enwere ntuziaka puru iche maka inyeghachi ego na izi ezi.
OBB Tiketi nkasi obi:
OBB Komfort tiketi bu tiketi OBB mgbe nile, a na-achụkwa ha maka njikọ site na ụgbọ oloko abalị. Tiketi OBB Komfort na-ekpuchi ụgwọ njem ahụ, ndoputa na udi nke njem ahọpụtara, na nri ụtụtụ n'ụlọ anwụ na-ehi ụra.
N'adịghị ka tiketi ọkọlọtọ, tiketi Komfort adịghị agbanwe agbanwe ma ọlị. E debere ya maka otu ụzọ na otu ụgbọ oloko. Kwesiri inweta tiketi ọhụrụ maka njikọ ọ bụla tupu ma n'okporo ụzọ nke tiketi a na-ekpuchi.
Maka ego nkwụghachi, A na-akwụghachi tiketi tiketi OBB na agba ụgwọ n'efu ruo mgbe 15 tobọchị mbụ nke izi ezi. Mgbe 15 akara ụbọchị, A na-akwụghachi tiketi ụgbọ oloko na 50% nke ọnụahịa mbụ.
Wepụrụ si Tiketi ọkọlọtọ na tiketi Komfort, OBB na-enye ndi ozo tiketi ndi ozo a maara dika ihe ndi Sparschiene. Oke a dị ọnụ ala maka ndị njem nwere obere ego. Enwere ụdị tiketi Sparschiene abụọ.
Enwere ndenye aha OBB?
Maka ụmụ amaala obodo, enwere ụdị ndebanye aha abụọ, Vorteilscard na Osterreichcard. Maka Internationals anyị na-atụ aro ịzụrụ ogologo oge tupu oge aga, a ga-ewetara gị nhọrọ kachasị ọnụ ala.
Enwere ike ịzụta Classic Vorteilscard na: (ụmụ amaala obodo anata 45% wezuga ego otu tiketi maka ndị njem na-azụta tiketi ha)
– Icheta tiketi OBB.
– N’ọrụ ndị ahịa OBB 05-1717
– Site na ndị ọrụ nọ ụgbọ oloko na bọs OBB.
Na otu Osterreichcard Classic, Inweta akwụkwọ ntinye akwụkwọ ọzọ ga-enweta ọzọ 5% n'otu ọkọlọtọ otu tiketi maka ndị njem mgbe ị na-azụta tiketi si:
– Otu igwe na-ere OBB n’ọdụ ụgbọ oloko.
Ndị njem njem agadi 15 n'ofe nwere ike ịzụta Vorteilscard Family. Kaadị a dị irè yana kaadi njirimara foto, nke kwesịrị ịgụnye afọ onye nwere ya. Na tiketi a, can nwere ike ịga njem ụgbọ oloko OBB niile.
Ndị niile na - ejide Vorteilscard Family na - enwe ọ theụ n'iju ihe ngosi Vorteilscard. Na mgbakwunye na perks kpochapụwo, ndị jidere kaadị Vorteilscard Family na-anata ego ahụ ma ọ bụrụ na ha na nwa ọhụrụ ma ọ bụ nwa na-eme njem. 4 permụaka na-ejide ezinụlọ Vorteilscard ga-anata egolata 100% n’otu ọkọlọtọ otu tiketi.
Kaadị ndị ntorobịa nke Austria
Ruo ụbọchị tupu ụbọchị ọmụmụ ha nke 26, ndị njem nwere ike ịzụta Osterreichcard Jugend. Nwere ike iji aka gị gosipụta afọ gị na NJ ya foto nke akaebe nke afọ.
Ndị nne na nna nke ụmụ aka na ụmụaka ndị na-anata ezumike ezinụlọ na Austria ma ọ bụ n'ebe ọzọ nwere ike ịzụta Osterreichcard Familie. Uru ndị a bụ otu ihe ahụ nke Osterreichcard kpochapụwo.
Ndị njem nwere ike ịzụta Osterreichcard Classic. Na otu Osterreichcard Classic, ha ga anata ego nke 100% na ọnụahịa nke ndoputa oche maka klas 1 na nke 2. Na klas nke Osterreichcard nke abụọ kpochapụla, ịnata a 50% mwepu ego na mgbanwe nke klaasị si na klas nke abụọ ruo na nke mbụ.
Seniormụ amaala agadi nke Austria na-eme njem 63 n'ofe nwere ike ịzụta Osterreichcard Senior. Uru ndị a bụ otu ihe ahụ nke Osterreichcard kpochapụwo.
Austria Card pụrụ iche
Ndị nwere nkwarụ nwere ndenye ndị a na asambodo nkwarụ Austrian ha ma ọ bụ nkwarụ siri ike metụtara agha nwere ike ịzụta Osterreichcard Spezial. Uru ndị a bụ otu ihe ahụ nke Osterreichcard kpochapụwo.
Linz na tiketi Saint Polten
Vienna na Salzburg tiketi
Saint Polten na Wiener Neustadt tiketi
Salzburg na tiketi Graz
Ogologo oge tupu ọpụpụ nke OBB ịbịarute?
O siri ike ikwu nke ọma, mana Chekwaa Train na-adụ ọdụ ị rute ihe dịka otu elekere tupu oge ọpụpụ gị. Ọ bụrụ n ’imecha akwụkwọ ikike ngafe n’oge, can nwere ike ịzụ ahịa maka ihe ịchọrọ iji mee ka njem ụgbọ oloko gị bụrụ nke ọma.
Kedu ihe usoro ụgbọ oloko OBB?
Can nwere ike ịchọpụta na ezigbo oge na homepage anyị na Save a train. Dị pịnye ebe ị nọ ugbu a na ebe ịchọrọ ịchọrọ, anyị ga-egosi gị ozi ahụ.
Kedu ụlọ ọrụ ndị OBB na-eje?
Vilọ ọrụ Vienna nke OBB bụ Vienna Hauptbahnhof (Ọgbọ Central Vienna), nke dị n'akụkụ Sudtiroler Platz na etiti Vienna.
Na Linz, Ugbu a ụgbọ oloko OBB pụọ wee si na Linz Central Station (Central ọdụ German dị na Hauptbahnhof), adịghị anya site na mmiri Danube.
Salzburg isi ọdụ ụgbọ oloko (Salzburg Central ọdụ ọdụ) dị n'etiti etiti obodo nke abụọ buru ibu na Austria – Salzburg.
Na-enye ohere ka ha dochie bọọdụ OBB insgbọ oloko?
A na-ahapụ igwe kwụ otu ebe na ụgbọ oloko OBB ma ọ bụrụhaala na ị zụrụ ha tiketi na ọdụ ụgbọ. Ha na-efu € 2 kwa igwe kwụ otu ebe.
Childrenmụaka Travelmụaka Na-eme Ejegharị Ọwara na Ọdụ OBB?
Ee, kama ọ bụ naanị ruo otu afọ. Youngermụaka ndị na-erughị afọ isii na-eme njem n'efu.
Anabatụrụ Anụmanụ na Tragbọ oloko OBB?
Ee, ha dị ka ogologo oge ha na-agbaso ụkpụrụ nduzi maka anu ulo. A ga-eburịrị obere ụmụaka na igbe ozu ma ọ bụ ihe yiri ya.
Kedu usoro ịbanye maka OBB?
Achọkarị OBB Ajụjụ – Ekwesịrị m ịtụ oche tupu oge eruo na OBB?
ị nwere ike boỌ dị mma a ama mna n'ọdịnihu na ụlọ OBB ụgbọ oloko maka 3 euro. ị uche nweta onwe ọdụ mgbe ịmechara ndoputa.
Enwere ikuku ịntanetị n'ime OBB?
Ee. Can nwere ike ịnụ ụtọ Internetntanetị ikuku efu na ụgbọ oloko OBB niile na klaasị njem niile mgbe ịzụrụ tiketi OBB (Ọkacha mma na SaveATrain.com).
Ọ bụrụ n’ị gụrụ ebe a, knowmara ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụgbọ oloko OBB ma dịrị njikere ịzụta tiketi ụgbọ okporo ígwè OBB na Chekwa ụgbọ oloko
You choro itinye peeji a na saiti gi? Pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-obb%2F%0A%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro), Ma ọ bụ ị nwere ike ị jikọtara ọnụ ugbu a na ibe a.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml ma inwere ike igbanwe / de ka / nl ma obu / fr na otutu asusu.